Taageerada Doorashooyinka | UNSOM
07:02 - 25 Sep
KOOXDA ISKU-DHAFKA AH EE TAAGEERIDDA DOORASHOOYINKA
Iyadoo laga jawaabayo codsi ka yimid Ra’isul Wasaaraha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka, ayaa waxaa bishii Nofember 2013 Soomaaliya booqday guddi ka socday QM, kaas oo ka dib markii uu qiimeeyey baahida hortaal hawlaha doorashada ku taliyey in Soomaaliya loo fidiyo taageero dhowr waji leh oo taabushaha doorashooyinka la xiriirta.UNSOM waxaaa awood loogu siiyey qaraarrada Golaha AmmaankaeeQaramada Midoobey ee tirsigoodu yahay 2102 (2013) iyo 2275 (2016) in ay taageerto diyaargarowga hannaanka doorashada 2016 iyo tan lugu wado in dadweynahu u codeeyaansannadka 2020.
Iyad oo laga duulayo Xirmada Heshiiska Cusub ee Soomaaliya (Somali New Deal Compact), Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay asteysay Shan Yool oo nabadda iyo dowladnimada lugu dhisayo (PSGs). Diiradda Kooxda Isku-dhafka ah ee QM u qaabilsan taageeridda Doorashooyinkuna waxay ku foogan tahay Yoolka 1-aad (Siyaasad loo dhanyahay). Ujeeddada istaraatijiyadeed ee Yoolka 1-aad waa in la gaaro Soomaaliya Federaal ah, nabdoon islamarkaana xasilloon, taas oo loo marayo hannaan siyaasadeed loo dhanyahay.
Kaalmada doorashada ee UNSOM waxaa loo qaabeeyey in Soomaaliya looga taageero gaarista ujeeddooyin wax-ku-ool ah sida ku cad waddada labo-shaaglaha ah, waxayna kala yihiin:
In la qabto doorasho sannadka 2016 (Ogolaansho Xaddidan)
In loo diyaargaroobo doorasho qof iyo cod ah, iyo afti dadweyne oo loo qaado dastuurka.
Hannaanka doorashada 2016
Muddada cayiman ee Baarlamaanka Federaalka iyo kan Fulintu wuxuu ku kala egyahay dhammaadka bilaha Agoosto iyo Sebtembar 2016. Sidaas oo ay tahayna, Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya (FGS) waxay caddeysay sannadkii la soo dhaafay in aysan suurtogal ahayn qabashada doorasho qof iyo cod ah 2016.
Taas beddelkeedana waxaa la qaban doonaa doorasho dadban oo awoodda lugula kala wareegayo, si ay kaabad ugu noqoto doorasho qof iyo cod ah.
Laga soo billaabo Oktoobar 2015 illaa Jannaayo 2016, kumannaan Soomaali ah ayaa ka qaybgalay kulamo looga arrinsanayey hannaanka doorasho ee ugu habboon in lugu dhaqmo 2016. Hoggaamiyeyaasha Federaalka iyo kuwa gobolladuna waxay isku raaceen dhismaha Aqalka Hoose ee baarlamaanka oo 275 kursi, kaas oo lugu soo xulayo awood qaybsiga beelaha ee 4.5 ku dhisan, halka Aqalka Sare oo 54 xubnood ka koobnaan doona ay soo xulayaan maamullada dalka ka jira iyo kuwa imaan doona.
UNSOM oo loo marayo Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, Kooxda Arrimaha Siyaasadda iyo Xallinta Khilaafaadka (PAMG) iyo Kooxda Isku-dhafan ee Taageeridda Doorashooyinka (IESG) ayaa si joogto ah ula shaqeeyey mas’uuliyiinta Soomaaliya, heer federaal iyo mid gobolleed, iyo sidoo kale saamileyda geeddi-socodka wada-xaajoodka. UNSOM waxay si dhow ugu lug leedahay hirgelinta hannaan doorasheed aan mugdi ku jirin sannadka 2016-ka.
Waxaa socda diyaargarow loogu jiro taageeridda goleyaal ka kala socda dowladda federal iyo gobollada oo hirgeliya hannaanka doorasho ee la isku raacay. Taageeradan waxaa ka mid ah, qorsheynta hawlgelidda, tababarrada, diiwaangelinta tartameyaasha, codeynta iyo tirinta, saadka, kormeerka, abaabulka, isku-dubba-ridka iyo qorsheynta amniga doorashooyinka
Doorasho qof iyo cod ah
Si la halmaasha taageerada hannaanka doorashada 2016-ka, UNSOM waxay Soomaaliya ka taagerysaa u diyaargarowga dooarasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda sannadka 2020-ka. Iyadoo lugu duulayo kaalmada UNSOM, Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay jeexeysa nashqadda siyaasadeed ee dhabbaha u xaareysa qabashada doorashooyin leh halbeeg caalami ah 2020.
UNSOM waxay sii wadi doontaa in ay si sokeysa ula shaqeyso Dowladda Federaalka iyo hay’adaha kale ee heer federal iyo mid goboleed leh si loo xaqiijiyo in geeddisocodka lugu tiigsanayo 2020 uu jidkii loogu talogalay ku socdo.
Hay’adda sida dastuuriga ah loogu igmaday qabashada doorashadu waa Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka (NIEC). UNSOM oo adeegsaneysa (IESG) ayaa gacan ka geystey horumarinta sharuucda uu Baaralamaanka ku dhisay guddiga islamarkaana qeexaya doorkiisa iyo shaqooyinkiisa. Tan iyo markii la magacaabay sagaalka xubnood ee guddiga NIEC Juulay 2015, IESG si hoose ayey ula shaqeyneysey xubnaha guddiga si ay ugu fidiso talooyin farsamo iyo tabantaabo karaan, qalab iyo xafiis KMG ah oo ay ku hawlgalaan.
Waxaa loo fidiyey tababarro la xiriira mabaa’diida maamulka doorashooyinka, meertada doorashooyinka, doorashooyinka jinsiga u dhego nugul iyo hoggaanka, xiriirinta iyo xirfadaha warbaahinta. Xubnaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka waxaa lugu caawiyey in ay booqashooyin aqoon kororsi u tagaan dalalka Tanzania iyo Turkiga si ay wax uga kororsadaan waayo-aragnimo la xiriirta nidaamka doorashada, islamarkaana waxay booqdeen dalka Koonfur Afrika oo ay ka barteen diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Sidoo kale guddiga NIECda waxaa la siiyay taageero dhanka la xiriirka iyo ka qeybqaadashada howlo ay soo abaabuleen dalalka Carabta, waxaana lagu wadaa in ay dhawaan ku biiraan Ururka Maareynta Doorashooyinka ee Dalalka Carabta. Talo-bixiyeyaasha IESG waxaa ka go’an in ay sii wadaan wada shaqeynta kala dhaxeysa NIEC maadaama uu guddigu gudagalayo diyaargarowga hawlahiisa shaqo, sida in uu xoghaymo iyo xarumo rasmi ah yeesho.
Sidoo kale waxaa laga taakkuleynayaa diyaarinta hannaan sharciyeed doorasho, sida sharciga doorashooyinka ee lugu dhaqmayo marka la gaaro 2020 iyo ka dibba. IESG waxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ka taageereysaa diyaarinta, qorista iyo meelmarinta sharciga doorashooyinka qaranka. Taageeradan waxaa ka mid ah fududeynta wadahadallo ku qotoma dib-u-eegista qabyo-qoraalka xeerka doorashooyinka oo dhex mara saamileyda arrintan ku lugta leh.
Aqoon-is-weydaarsiyo la isku-barbar-dhigayo nidaam doorasheed dhowr ah ayaa la qorsheynayaa, si loo fududeeyo isfaham intan ka badan oo laga gaaro nuucyada doorasho ee la isku eegayo iyo faa’idooyinka ku jira. Si loo mideeyo, Si sare loogu qaado fahamka erey-bixinta doorashada, IESG waxay ka caawineysaa guddiga NIEC iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka dadaallada ay ugu jiraan qorista erey-bixin doorasho oo ku qoran afafka Soomaliga, Carabiga iyo Ingiriiska. Ugu dambeyn, iyadoo lala kaashanayo jileyaal iyo saamiley kale, waxaa taageero lugu bixinayaa sidii dadka Soomaaliyeed loogu bandhigi lahaa hadba meesha ay marayaan hawlaha doorashadu, taas oo loo marayo xiriirro kala duwan oo uu ku jiro olole wacyigelin dadweyne.